China Custom Tungsten Carbide Seal Mhete yeMechanical Seal Kugadzira uye Fekitori | N & D Carbidhi
Tsika Tungsten Carbide Seal Mhete yeMechanical Zvisimbiso
Tungsten carbide mechiki zvisimbiso zviri kushandiswa zvinowedzera pane fluid pombi kutsiva yakazara gland uye muromo chisimbiso. tungsten carbide mechanical chisimbiso Pump ine mechanical chisimbiso inoita zvakanyanya kushanda uye kazhinji inoita zvakanyanya kuvimbika kwenguva yakareba yenguva.
Zvinoenderana nechimiro, izvo zvisimbiso zvinodaidzwa zvakare kuti tungsten carbide mechanical chisimbiso mhete. Nekuda kwehukuru hwe tungsten carbide zvinhu, tungsten carbide mechanical chisimbiso mhete inoratidza kukwirira kuomarara, uye chakanyanya kukosha ndechekuti vanodzivisa ngura uye abrasion zvakanaka. Naizvozvo, tungsten carbide mechanical chisimbiso mhete dziri kushandisa yakafara pane zvisimbiso zvimwe zvinhu.
Tungsten carbide mechanical chisimbiso inopihwa kudzivirira pumped fluid kubva mukudonha kunze pamwe nemudhiraivho. Iyo inodzorwa leakage nzira iri pakati pemapadenga maviri maficha ane hukama neiyo inotenderera shaft uye iyo dzimba zvakateedzana. Iyo yekudonha nzira gwanza inosiyana sezvo zviso zviri pasi pekusiyana kwekunze mutoro uyo unowanzo fambisa zviso zvakatarisana.
Izvo zvigadzirwa zvinoda imwe shaft dzimba dhizaini dhizaini ichienzaniswa neiyo yeiyo imwe mhando yechimakanika chisimbiso nekuti mechina chisimbiso kurongeka kwakanyanya kuomarara uye mechiniki chisimbiso haipe chero rutsigiro kune iyo shaft.
Tungsten carbide mechanical chisimbiso mhete inouya mumhando mbiri dzekutanga:
Cobalt yakasungwa (Amonia maitiro anofanirwa kudzivirirwa)
Nickel yakasungwa (Inogona kushandiswa muAmoniya)
Kazhinji 6% bhainda zvinhu zvinoshandiswa mu tungsten carbide mechanical chisimbiso mhete, kunyange hazvo huwandu hwakawanda hunowanikwa. Nickel-yakasungwa tungsten carbide mechiniki chisimbiso zvindori zvakanyanya kuwanda mumvura yakasviba pombi musika nekuda kweyavo yakagadziriswa ngura kuramba kana ichienzaniswa necobalt yakasungwa zvinhu.
Pashure: Tungsten Carbide Seal Ring ine Nhanho yeMechanical Seal
Zvadaro: Tungsten Carbide Bush yeMagetsi Akanyudzwa Pombi